Android version 4.1.2 အတွက် Google App - .::just for share::.
Home » android » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » Android version 4.1.2 အတွက် Google App
Android version 4.1.2 အတွက် Google App
Android version 4.1.2 အတွက် Google App သွင်းလို့ရတဲ့ Apk လေးကို Free မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ဒီ APK မှာပါတဲ့ Function နှစ်ခုကတော့ Delete Now နဲ့ Install Now ပါ။
Delete Now ကတော့ Android version 4.0 ကျော်ရင်အသုံးပြုလို့ရမည်ဖြစ်ပြီးဒီ Function ကိုအသုံးပြုကာ ဖုန်းအတွင်းထည့်သွင်းထားသော Google App များကို ပြန်လည်ဖျက်လို့ရပါတယ်။
မည့်သည့် Google App Installer များဖြင့်သွင်းထားပြီး Error တက်နေရင် ဒီ Function နဲ့ Error ရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Install Now ဆိုတဲ့ Function ကတော့ Android version 4.1 မှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီးGmail,Gtalk, နဲ့ Google Playstore များကိုသွင်းနိုင်ပါတယ်။
10Mb သာသာ ရှိတဲ့ Apk လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။
ဒီ App ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Android version 4.0 နဲ့အထက်ရှိရပါမယ်။